ချောအိမာန် (မန္တလေး): စာရေးဆရာတစ်ဦး၏ ကြေကွဲခြင်း
လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ စာမူခလေးကိုကြည့်ပြီး ….သူလေးတွဲစွာသက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်….97လောက်က စရတဲ့ဝတ္တုတိုစာမူခက ခုနှစ်ရာ …. အဲဒီတုန်းကမှတ်မိသေးတယ်…ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆန်ဝယ်နိုင်တယ် .. စတိတ်ရှိုး ခုနှစ်ရာတန်လက်မှတ်နဲ့ ကြည့်နိုင်သေးတယ်…ခုကိုယ့်လက်ထဲပါလာတဲ့ စာမူခက သုံးထောင် အိမ်အပြန် အိမ်သူ ကျေနပ်အောင် ဘာဝယ်ရသနည်း .. သူခေါင်းကိုက်သွားတယ် .. ကားခ နှူတ်ရင်တောင် သုံးထောင်မပြည့်ချင်..တော်သေးတယ် ….ဆိုင်ကယ်အစုတ်လေးရှိနေသေးလို့ … စာရေးဆရာရဲ့ ပီတိကိုတော့ တစ်ချို့က ခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘုး…….ဗိုက်မ၀လို့တဲ့ .. ကျွန်တော်က လက်ထဲပါလာတဲ့ စာအုပ်လေးကို တဖတ်ဖတ်လှန်ရင်း ဟန်ပါပါနဲ့ စူပါမားကတ်တစ်ခုပေါ်တက်သွားတယ် …. ဘာဝယ်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမရှိပေမဲ့ …ဘာကြည့်ကြည့် အရင်းမစိုက်ရတာမို့ ကြည့်ရတာလဲတစ်မျိုးအရသာပေါ့.အိမ်သူကိုတော့ ဒီလိုနေရာခေါ်ဖို့စိတ်မကူးဘူး … မိန်းမဆိုတော့ တွေ့ကရာ အကုန်ဝယ်ချင်တာ … ကျွန်တော်က စာအုပ်သမားဆိုတော့ စာအုပ်တွေရောင်းတဲ့ အထပ်ရောက်သွားတယ် … ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့စာအုပ်လေးတွေလျှောက်ကိုင်ကြည့်နေတုန်း …… အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်ပတ်ဝန်းကျင် …. ကောင်မလေးက အိတ်ဆောင်ဗေဒင်စာအုပ်လေးတွေကို သူ့နေ့နဲ့သူအပြိုင်ရွေးနေတယ် … ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်က စာအုပ်ရွေးနေရင်း … သူတို့ထဲက မှန်ကြောင်လေးနဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ပြောတယ် ……‘မြသန်းတင့်ရဲ့ သုခမြို့တော်တို့ …. ရွှေဥဒေါင်းတို့ …. ဂျာနယ်ကျော်မမလေးတို့ဖတ်ပါလားတဲ့ ..ကောင်မလေးကခေါင်းခါရင်း….‘အရူးဘဲ ဒီမှာ ချစ်သူဖတ်ဖို့ ယောက်ျားတို့အကြောင်းသိကောင်းစရာတို့ … သမီးလေးဖတ်ဖို့တို့ဖတ်မှာ….ငါတို့လို အရွယ်နုနုဖတ်ဖတ်တွေက စာအကြီးကြီးတွေမဖတ်သင့်သေးဘူး’ ကောင်မလေးပြောတော့ ကောင်လေးက ဘာမှမပြောတော့ဘူး….ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်စာအုပ်မတွေ့တာနဲ့အဲဒီနေရာက ရှောင်ရင်း … အောက်ထပ်ဆင်းခဲ့တယ် .. စက်လှေကားနဲ့ဆင်းပြီး အောက်ရောက်တော့ ခုနကအုပ်စုကိုတွေ့ပြန်တယ် .. အဲဒီအောက်ထပ်မှာ မိတ်ကပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Promotion ပွဲတစ်ခုရှိသလို ……အဆိုတော် ပေါက်စလေးတွေအုပ်စုရဲ့ CD တိတ်ခွေ ရောင်းပြီး လက်မှတ်ထိုးပွဲရှိလို့ လူစည်နေတယ် .. ..ကောင်မလေးတွေ အလုအယက်သွားဝယ်… လက်မှတ်ထိုးခိုင်းကြတယ် …အဲဒီအဆိုတော်တွေ မြင်ဖူးအောင်တိုးကြည့်ပေမဲ့ သူတို့ကို ကျွန်တော်မသိဘူး… ကောင်မလေးတွေက ခုန်ဆွ ခုန်ဆွနဲ့ မော်ဒယ်ရှိုးပြတဲ့ စင်နားရောက်သွားပြန်တယ် … သူတို့ထဲက ပါလာတဲ့ ကောင်လေးက ၀ါသနာမပါဘူးထင်ပါရဲ့ … ခပ်ဝေးဝေးကနေကြည့်နေတယ် .. ကောင်မလေးတွေက ခနစောင့်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ လက်ကာပြပြီးရှေ့တိုးသွားကြတယ် .. ကောင်လေးက လူတွေများလာလို့ တိုးရင်းနဲ့ ကျွန်တော့နားရောက်လာတယ် … သူက စာအုပ်လေးပိုက်လို့စင်ပေါ်ကိုကြည့်နေတယ် .. ကျွန်တော်က အမှတ်မထင်ဘဲ သူ့လက်ထဲကစာအုပ်လေးဆီ စိတ်ရောက်သွားတယ်…..အစွန်းအစလေးမြင်လိုက်ရတာနဲ့ ကျွန်တော့ရင်တွေ ရင်ခုန်လှုပ်ရှားသွားတယ် ..ဘ၀မှာ ရှိစုမဲ့စုနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့စာအုပ်လေး စာဖတ်သူ တစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်ရှိနေခြင်းအတွက် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်သွားမိတယ် … စိတ်ထဲမှာ အဲဒီလူငယ်လေးနဲ့လည်း စကားပြောချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ် ….ယဉ်ကျေးပုံရတဲ့ အဲဒီလူငယ်လေးကိုကြည့်ရင်း …. ‘ ညီလေး ‘ ကျွန်တော် ခေါ်လိုက်တော့ သူကလှည့်ကြည့်တယ် …‘ ညီလေးက စာဖတ်ဝါသနာပါပုံရတယ်နော် .. ညီလေးလက်ထဲကစာအုပ်ဘယ်က၀ယ်လာတာလဲ’‘ ဒီစာအုပ်ကို မနည်းရှာလာရတာ .. ဖတ်ချင်နေတာကြာပြီ….ဆိုင်က လက်ကျန်လေးတွေ့လို့ အသည်းသန်ဝယ်လာတာ .. ကောင်းတယ် အကိုရ … ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ဘ၀ဒဿနတွေ အများကြီးပါတယ် ‘‘ ဟုတ်လား အကိုလဲ စာဖတ်ဝါသနာပါတယ် ‘‘ အကိုဖတ်ချင်လို့လား ငှားပေးမယ် ‘‘ ရပါတယ် ငါ့ညီရာ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ‘‘ ခုခေတ်စာအုပ် ဈေးတွေကကြီးတယ် ‘‘ ကျွန်တော်ကတော့ စာကောင်းရင်ဈေးမမြင်ပါဘူး .. ကျွန်တော်တို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မဲ့ဟာ ..ဖတ်ကောင်းတာဆိုကြိုက်တယ် ….ဒီစာအုပ်က တစ်ထောင့်ငါးရာပေးရတယ် …ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ စာအုပ်ဆိုရင် ချောင်တွေထဲထိလိုက်ရှာတယ် …. ဒီစာရေးဆရာက ဒီတစ်အုပ်ဘဲထွက်သေးတာ …ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအကိုဖတ်ဖူးလား ‘ကျွန်တော် ခေါင်းငြိမ့်လိုက်တယ် ..ကျွန်တော်စာအုပ်တွေအများကြီး တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ်ဆက်တိုက်ထုတ်ချင်တာပေါ့ … သူများတွေလိုလေ ခေါင်းထဲမှာလဲ စာအုပ်တွေအများကြီး ကုန်ကြမ်းတွေအများကြီး ဒါပေမဲ့ ..ကျွန်တော့ အတွေးတွေ ရပ်တန့်သွားတယ် … ခုနက ကောင်မလေးအုပ်စု သူတို့နားရောက်လာတယ် ..‘ အာကာ .. အာကာ ငါ့ကို စာအုပ်ခဏပေးစမ်းပါ စာရွက်ပါလဲ စာရွက်ပေး’‘ ဘာစာအုပ်မှ မပါဘူး .. စာရွက်လဲမပါဘူး .. ဘာလုပ်မလို့လဲ‘‘ ဟိုမှာ အဆိုတော်ကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းမလို့ …. ငါတို့မှာလဲ ဘာမှမပါဘူး’‘ နင့်လက်ထဲက စာအုပ်ပေး ‘‘ ဟာ ဘယ်ဖြစ်မလဲ .. ဒါလက်မှတ်ထိုးတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ဘူး’‘ ဟာဒီစာအုပ်တောင် ငါမနည်းရှာဝယ်လာရတာ ‘‘ နင်ကပ်စီးတိုမနေနဲ့ နင့်စာအုပ် အစုတ်ပလုတ် တစ်ထောင့်ငါးရာပေးရတယ်မဟုတ်လား … ငါနှစ်ထာင်ပြန်ပေးမယ် . နင့်စာအုပ်က ဘယ်မှာရှာဝယ်ဝယ်ရတယ် … အဆိုတော်က ဒီနေ့တစ်ရက်တည်း’‘ နင်တို့ဘယ်လိုတွေလဲ .. ငါဒီစာရေးဆရာနဲ့တွေ့ရင် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းအုန်းမှာ မဖြစ်ဘူး ‘ကောင်လေး မပေးချင်တာနဲက ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ ပြောလိုက်ပုံဘဲ …‘ နင်တကယ်ကြောင်တယ် .. အဲဒီဘိုးတော်ဘုရားလေးဖက်ပြေးတုန်းက ထွက်တဲ့ စာရေးဆရာကသေပြီဟ ‘‘ မဖြစ်နိုင်တာ ‘‘ ကဲ ဖြစ်နိုင်တာ မဖြစ်နိုင်တာ အသာထား ကဲ ပေးပေး ‘‘ အောက်ထပ်မှာစာအုပ်ဆင်းဝယ်ပေါ့ …အချိန်မရှိတော့ဘူဟ၊အဆိုတော်က ပြန်တော့မှာ ပေးစမ်းပါဆို ‘ ပြောပြောဆိုဆို ကောင်မလေးက ကောင်လေးလက်ထဲက ကျွန်တော့စာအုပ်လေးကို ဘက်ကနဲ ဆွဲယူသွားခဲ့တယ် …. ကောင်လေးက စိတ်တိုပြီး ကျွတ်ကနဲစုတ်သပ်ရင်း .. ကြေကွဲသွားပုံရပါတယ် ..ကျွန်တော် လဲ တော်တော်ကြေကွဲသွားရပါတယ် … သူ့ရှေ့မှာ အရှင်လတ်လတ်ကြီး ရှိနေသော စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဟာ သေဆုံးသွားပြီတဲ့ .. ‘ကျွန်တော့ကိုဆို အဲဒီလို သိပ်နိုင်စားတာဘဲ ..ခုကိစ္စတော့ လုံးဝသည်းမခံနိုင်ဘူး အစ်ကိုရာ ‘ဘေးနားရှိနေသော ကျွန်တော့ကို လှမ်းပြောရင်း ..ကောင်လေးမျက်ဝန်းတွေကြောင့် ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ် …‘ စာအုပ်ကလည်းပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး..စာပေရဲ့ တန်ဖိုးကို လုံးဝနားမလည်ဘူး .. ကျွန်တော့မှာ ရူးသွပ်မှု တစ်ခုရှိတယ် အကို … စာပေကို ၀ါသနာပါလို့လားသိဘူး ..စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ လက်မှတ်ကို ကျွန်တော်အရမ်းတန်ဖိုးထားတယ် … ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့လက်မှတ်တွေ .. ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘဲခင်ခင် လက်မှတ်အရထိုးခိုင်းတယ် … သူတို့စာအုပ် ရှေ့မှာပေါ့ .. ကျွန်တော့မှာ လက်မှတ်တွေရှိတယ် …..အစ်ကို ကျွန်တော့ရူးသွပ်မှုက ရယ်ရလား ‘‘ မရယ်ရပါဘူး ငါ့ညီရ လူတွေမှာ ကိုယ့်တန်ဖိုးထားမှု နဲ့ ကိုယ်ပေါ့ အစ်ကိုလည်း ငါ့ညီလိုပါဘဲ … ငါ့ညီ စာအုပ်လေးအတွက်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ အစ်ကို့ဆီရှိတယ် ပို့ပေးမယ် ‘‘ ဟာ နေပါစေအစ်ကိုရာ အကိုလဲကြိုက်လို့ ၀ယ်ထားတာဘဲ ..မလုပ်ပါနဲ့ ‘‘ ရတယ် အစ်ကို့မှာ အပိုရှိတယ် ..ငါ့ညီနာမည်နဲ့လိပ်စာပြော ‘‘ ကျွန်တော်ကနယ်ကပါ ..နာမည်က သားဇင် လိပ်စာက ……………………….’‘ အိုကေ …ငါ့ညီကို အစ်ကိုပို့ပေးလိုက်မယ် ‘‘ အစ်ကို နာမည်ပြောပါဦး ‘‘ ကိုကို လို့မှတ်ထားလိုက် ကဲ သွားလိုက်ဦးမယ် ‘ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ပြီး ကောင်လေးက ကောင်မလေးအုပ်စုကို စောင့်ရင်း ကျန်ရစ်တယ် ….ကျွန်တော်ကတော့ ဈေးထဲဝင်ခဲ့ပြီး မဟေသီဖို့ လိမ္မော်သီးဝယ်ခဲ့လိုက်တယ်……အိမ်ရောက်တော့ တစ်နေ့တာ အဖြစ်ပျက်လေးကို ပြန်တွေးရင်း ကျေနပ်ရမှာလိုလို…..ကြေကွဲရမှာလိုလိုစိတ်ထဲစိုးနစ်နစ်ကြီးနဲ့တမျိုးခံစားရတယ် ….. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း စာပေကို တန်ဖိုးမထားတဲ့သူဆို သိပ်မုန်းတာဘဲ …တန်ဖိုးထားတဲ့သူကျအလိုလို ခင်မင်မိပြန်တယ် ….. ကျွန်တော်စာအုပ်မထုတ်ဖြစ်တာ ငါးနှစ်ရှိပါပြီ … သူတို့အသက်အရွယ်သေးသေးလေးနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ဘိုးတော်ဘုရားခေတ်က စာရေးဆရာ ပေါ့လေ … ဒီခေတ်စာအုပ်တွေကို ဟောတစ်အုပ်၊ဟောတစ်အုပ်နဲ့ ထုတ်နေနိုင်သူများကို ချီးကျူးပါတယ် … တစ်ခါတည်းဆယ်အုပ်တန်းရေးထားတာတို့ အုပ်နှစ်ဆယ် စာရှိနေတာတို့ …၀င်ငွေကလည်းအဆင်ပြေဘို့ .. စာဖတ်သူ ကျောင်းသူချာတိတ်လေးတွေကလည်း အသဲစွဲဖြစ်လို့ ….. ကျွန်တော့်မှာတော့ ဆယ်အုပ်ရေးထားတာ အဆင်သင့်ရှိဖို့နေနေသာသာ … တစ်အုပ်ဆိုရင်ကိုအချိန်အတော်ပေးရတာ ….. အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဖတ်နဲ့ ဘယ်ထုတ်ဝေသူကမှ စိတ်မရှည်ဘူး …. အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ကို ဘယ်စာအုပ်တိုက်ကမှ မကမ်းလှမ်းတော့ဘူး … ကျွန်တော်နဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်လည်း အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီး ကင်းဝေးသွားတယ် …. ဒီနေ့ သားဇင်ဆိုတဲ့ ချာတိတ်လေးကို စားအုပ်ရှေ့မှာ ကျွန်တော့လက်မှတ်ထိုးပြီး စာအုပ်ပို့ပေးလိုက်တယ် စာအုပ်ရရင် သူသိပ်ဝမ်းသာပြီး စာရေးချင်မှာဘဲ ဆိုပြီး လိပ်စာလေးပါထည့်ရေးပေးလိုက်တယ်…..
ကျွန်တော်လည်း သူ့ပြန်စာလေးကို မျှော်နေမိတယ် ……. တခါတလေ လောကကြီးဟာ အင်မတန်အံ့သြစရာကောင်းတယ် ……. ကြောင်းကျိုးညီညွတ်မှု မရှိဘဲခဏလေးလာတိုက်ဆိုင်တဲ့ လူအပေါ်ခင်မင်နေမိတတ်သလို… နေ့တိုင်းမြင် …. နေ့တိုင်းတွေ့ တစ်ရုံးတည်းအချင်းချင်းမှာ မျက်နာချင်းမဆိုင်ချင် လောက်အောင် ဖြစ်နေသူတွေလည်း အများသား ….. ကျွန်တော် … သားဇင်ဆီက တုန့်ပြန်မှုကို မျှော်လင့်နေခဲ့ပေမယ့် … သူ့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုဟာ အံ့သြမှာလားဝမ်းသာမှာလား …….. သူ့ရဲ့ရူးသွပ်မှုလေးတစ်ခုအတွက် ကျွန်တော့် လက်မှတ်နဲ့ စာအုပ်ဟာ တန်ဖိုးရှိစေမှာပါ။ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ကျွန်တော်ဆီကို သားဇင်နေတဲ့ မြို့ကနေစာတစ်စောင်ရောက်လာပါတယ် …….ကျွန်တော်စာလေးကိုဖောက်ရင်း ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ သားဇင်ဆီကမဟုတ်ဘဲ သားဇင်အမေဆီက ဖြစ်နေကြောင်း အံ့သြစွာတွေ့လိုက်ရတယ် …….. ဆရာ ….. သားလေးဆီကို မှတ်မှတ်ရရစာအုပ်ပို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် …..သားလေးကစာပေကို အလွန်ဝါသနာပါပါတယ် …. သူ့စာအုပ်စင်မှာ စာအုပ်တွေအများကြီးပါဘဲ စာရေးဆရာရဲ့လက်မှတ်တွေကိုလည်း သူ အလွန်တန်ဖိုးထားပါတယ် … ဆရာလက်မှတ်နဲ့ စာအုပ်ပို့ပေးလိုက်တာသားလေးသိရင် သိပ်ဝမ်းသာမှာ … သားလေးက ဆရာစာအုပ်လေး မရောက်ခင် တစ်ရက်က ဆိုင်ကယ်အက်စီးဒင့် ဖြစ်လို့ ရုတ်တရက်ဆုံးသွားပါတယ် …. ကျွန်မတို့မှာ သားလေးတစ်ယောက်တည်းမို့ များစွာ ယူကျုံးမရဖြစ်ရပါတယ်.. သားလေးအမေတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဆရာ့ကို ..ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါရစေ ….. ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဒေါ်ခင်မြဇင် ကျွန်တော် စာဖတ်ပြီး …. တော်တော်ကြေကွဲသွားပါတယ် .. စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဘ၀မှာ စာရေးရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ကူးရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ..ကြေကွဲမှုကို စာထဲနှစ်ပြီးခံစားခဲ့ရဘူးတယ်….အပြင်မှာ ခံစားဘူးတာ ကျွန်တော့ဘ၀မှာ မရှိသလောက်ပင် … ဒီတစ်ခါတော့ အပြင်မှာကျွန်တော်ထိခိုက်ကြေကွဲစွာ ခံစားလိုက်ရပါတော့တယ် …… ဒါဟာ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲခြင်းဆိုလည်း မှန်နိုင်ပါတယ် ………. သားဇင်ရေ ကောင်းရာဘုံဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေကွာ…… ငါ့ညီအတွက် အမှတ်တရ ၀တ္တုလေးတပုဒ်ကို ကိုယ်ရေးဖို့ စိတ်ကူးလိုက်ပြီ …. အဲဒီ ၀တ္တုတိုလေးရဲ့နာမည်က ‘စာရေးဆရာတစ်ဦး၏ ကြေကွဲခြင်း ‘ တဲ့ …………………။ ပန်းအလကာင်္မဂ္ဂဇင်း(6.11.2006) ချောအိမာန်(မန္တလေး)
အင်း ပို့စ်လေးဖတ်ရတာစိတ်မကောင်းစရာဘဲ ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း စာရေးဆရာတွေရဲ့လက် မှတ်ကိုသဘောကျတာပဲ။ ကျွန်တော်တော့မ သေလောက်ပါဘူးနော်။ခင်မင်လျှက်ကိုကိုးအိမ်
စာပေကို တန်ဖိုးထားတာလေးကို သဘောကျလိုက်တာ... ဖတ်လို့ သိပ်ကောင်းတာပဲ... စိတ်မကောင်းစရာလေး..
ဒီနေ့ ကျွန်မရဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ စိုပြည်လျက်ရှိနေတယ်။ဧည့်ခန်းရဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ စားစရာတွေ အပြည့်ရှိနေသလို ရယ်မောပြောဆိုနေသံမှာ ပြန်စဉ်းစားရင်လွန်ခဲ့သော နှစ်များဆီက အတိုင်းပါပဲ။ကျွန်မက ဧည့်ခန်းထဲက ဧည့်သည် မမများအတွက် အအေး၊ ကော်ဖီတွေဖျော်နေတယ်၊ အကြိုက်ကလည်းတယောက်တမျိုး…၊ ကျောင်းကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေမို့ အတွင်းသိ၊ ကျွန်မတို့ ခုလို ပြန်ဆုံနိုင်ဖို့တော်တော်ကြိုးစားထားရတာ၊ ကျောင်းပြီးတော့ အလျှိုလျှို အိမ်ထောင်ကျကုန်ကြတယ်၊ အဲဒီကတည်းကလေးယောက်လုံး တခါမှ မဆုံခဲ့၊ ဒီကြားထဲ သူ့အလုပ် ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ မအားတာနဲ့ပဲ… ပြောင်းတဲ့လူကပြောင်းနဲ့ မတွေ့ကြတော့ဘူး၊ အရင်က တယောက်အကြောင်း တယောက် သိကြ ပေမဲ့ ခုချိန်မှာပြောင်းလဲမှုတွေများစွာနဲ့ ဝေးနေကြရတယ်၊ ဒီနေ့တော့ ကျွန်မရဲ့ မှတ်မှတ်ရရ မွေးနေ့လည်း ဖြစ်တာမို့မဖြစ် ဖြစ်အောင် ဆုံဖို့ တလလောက် ကြိုချိန်းခဲ့ရတယ်၊ ကျွန်မတို့ အားလုံးပျော်ရွှင်နေကြတယ်၊ဒီအရသာကို လွတ်လပ်စွာ ပြန်ခံစားခွင့်ကို မျှော်လင့်နေခဲ့တာ ကျွန်မတို့ လေးယောက်လုံးပဲ၊အားလုံးဝေးကွာနေရာက ခုလို ပြန်ဆုံတော့ ခံစားမှု အသစ်လေး ရသလို ကျွန်မတို့ အားလုံး အိမ်ထောင်သည်တွေနဲ့မတူပဲ အပျိုတွေနဲ့ တူနေတယ်။
ကျွန်မတို့ တွေ့ဆုံမိကြရင် ကိုယ့်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာ၊ မပြေလည်မှု၊ ပြေလည်မှုတွေအားလုံးပြောဖို့၊ရင်ဖွင့်ဖို့ဟာလည်း တာစူထားကြတယ်၊ အသီးသီး အိမ်ထောင်ကျ သွားပေမယ့် အဲဒီအိမ်ထောင်ရေးရဲ့အခြေအနေကို မသိကြသေးတာမို့ တယောက်အကြောင်း တယောက် စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက် စိတ်ကူးယဉ်ကြသလဲ ဆိုရင် ရင်ဖွင့်ဖို့ကို မဲလိပ်နှိုက်ပြီးအမှတ်စဉ်တပ်ကြတယ်၊အမှတ်စဉ် နံပါတ်(၁)ကို ကျသွားသူက “ယမင်းတင်အောင်” တဲ့အမင်းရဲ့ မျက်နှာလေးက အရင်အတိုင်း ချောဆဲ။ နှုတ်ခမ်းက ပြုံးစစ ဖြစ်သွားပြီး သူ့အကျင့်အတိုင်းဆံပင်ကို တချက်ခါလိုက်ရင်း….“ ငါ အရင်ကျသွားတော့ သိပ်မကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့် ငါ အရမ်းပြောချင်နေတယ်၊ အဓိကကငါ့ဘ၀မှာမထင်မှတ်တာတွေ တွေ့လာရတာပဲ၊ နင်တို့ သိတဲ့အတိုင်း အိမ်ထောင်မကျခင်ကတည်းက အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးလည်း ငါပဲ ဦးဆောင်လုပ်ခဲ့ရတာ၊ ပွဲရုံလုပ်ငန်းဆိုတော ရှုပ်တော့ ရှုပ်နေတာပေါ့၊ ငါက ငယ်ငယ်ကတည်းက ဦးဆောင်လာရတော့ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ၊ ငါ့စိတ်က မြန်တော့ ငါလုပ်သမျှပြီးလွယ်ပြီးအောင်မြင်တာများတယ်၊ ဒါကတော့ ငါ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပွဲရုံနဲ့ ရင်းနှီးနေလို့ပဲ ထားပါတော့…”“ ငါ `ကိုမျိုးဆက်`ကို ဖြစ်စေချင်တာက ငါ့စီးပွားရေးလည်း သူ့စီးပွားရေးပဲငါ့မိဘပိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အသိကသူ့ခေါင်းထဲကို ရောက်နေတယ်၊ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ စိတ်ပါစွာ ၀င်လုပ်စေချင်တယ်၊ သူ့အတွေးက သူကငါ့လောက် မလုပ်နိုင်တော့ အလိုလို feel ဖြစ်တယ်၊ ငါ့မိဘကလည်း သူ့ကို မနှိမ်ပါဘူး၊ သူလုပ်တဲ့ကား၊ဆိုင်ကယ် ပွဲစားအလုပ်က ရတလှည့် မရတလှည့် သိတဲ့ အတိုင်းပဲ၊ သူသာ ဦးစီးနိုင်မယ်ဆိုရင် ငါ ကတဖက်ကဆိုင်တခုခု ဖွင့်လို့ ရတယ်၊ စီးပွားရေးကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာ ငါ့လောက် သူနားမလည်ဘူး…”
“ကုန်သည်တွေကလည်း ကြာတော့ ငါ့ပဲ သိတာပေါ့၊ ဟိုနေရာဆိုလည်း ငါ ဒီနေရာဆိုလည်း ငါပဲ၊ ဒီကစ္စတွေငါ လုပ်ရလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူ့ကိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့ ကြာတော့ ငါ့မိဘက ဘာမှမပြောပေမယ့်သူ့ဟာသူ ရှောင်ဖယ်လာတယ်၊ နောက်ဆုံး စိတ်အလိုမကျမှုတွေက ငါ့အပေါ် စုပုံလာပြီး မကြာခဏစကားများကြတာပေါ့၊ အရင်က ငါ သူ့ကို အဲဒီိလို စိတ်ဓါတ် ရှိလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝ မထင်ခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကငါ့ရဲ့Main ပြဿနာပဲ ”“ဟုတ်ပြီ အမင်းရဲ့ ပြဿနာကို သိရပြီ၊ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာကို နောက်မှအဖြေထုတ်ကြတာပေါ့၊ခု ဒုတိယ တယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်တေးသံသာကို နားဆင်ရအောင်”ဒုတိယ အလှည့်က “အသော်”…။အသော်က ဘာပြောရမလဲ စဉ်းစားနေပုံနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်လိုက်သေးတယ်၊“ငါကတော့ မိဘတွေရဲ့ ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သူ ဆိုတော့ ကိုနိုင်နဲ့ လမ်းခွဲပြီး မိဘတွေပေးစားတဲ့ကိုဘုန်းကို လက်ထပ်လိုက်ရတာ ဒီအထိ ရှင်တို့ သိပါတယ်၊ ငါဟာ ကိုနိုင့်ကို လမ်းခွဲပြီးအိမ်ထောင်တခုအပေါ်မှာ အမြဲ သစ္စာရှိခဲ့ပါတယ်၊ ကိုဘုန်းက အရင်က ရည်းစား မရှိခဲ့ဘူး၊ ကိုနိုင့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူကသ၀န်တိုတယ်၊ ကိုနိုင်နဲ့က စီးပွားရေးအရ တခါတလေ ဆက်ဆံရတာလည်း ရှိတာပေါ့..”“သူက အမြဲတမ်း သံသယ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်တတ်တယ်၊ တကယ်တော့ မိန်းမအားလုံးဟာ မျက်နှာမများချင်ကြတဲ့ လူချည်းပဲ၊ ဒီတယောက်ထဲ ချစ်ပြီး အိမ်ထောင်ဖက် ကိုလည်း ဒီတယောက်ပဲ ဖြစ်ချင်တာပဲ၊ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ဟာ ထပ်တူကျချင်မှ ကျတတ်တာပဲ၊ သူကတော့ ငါ့တယောက်ကိုပဲ ကြိုက်ပြီးလက်ထပ်နိုင်ခဲ့တာ ဆိုတော့ ကံကောင်းတာပေါ့၊ ငါနဲ့ ကိုနိုင်ကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ သန့်ရှင်းတယ်၊ ဒါကိုသူ့မှာ သံသယ အပူတွေနဲ့ နေရတာ သူ့အတွက် မငြိမ်းချမ်းဘူး၊ သူ့ ကြည့်လိုက်ရင် မြုံစိစိနဲ့၊သေသေချာချာတော့ ငါ့ကို မပြောဘူးဟ၊ ငါတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ အဲဒီလိုချည်း မဖြစ်ချင်ဘူး၊ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့၊ ဒီလိုကိစ္စတွေက ကြာလာရင် သူ့ဘက်က ပေါက်ကွဲလာမှာ စိုးရိမ်တယ်၊ ငါ့ပြဿနာကတော့ ဒါပဲ၊ ဘာမှ မဟုတ်ပဲ..
“ကုန်သည်တွေကလည်း ကြာတော့ ငါ့ပဲ သိတာပေါ့၊ ဟိုနေရာဆိုလည်း ငါ ဒီနေရာဆိုလည်း ငါပဲ၊ ဒီကစ္စတွေငါ လုပ်ရလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူ့ကိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့ ကြာတော့ ငါ့မိဘက ဘာမှမပြောပေမယ့်သူ့ဟာသူ ရှောင်ဖယ်လာတယ်၊ နောက်ဆုံး စိတ်အလိုမကျမှုတွေက ငါ့အပေါ် စုပုံလာပြီး မကြာခဏစကားများကြတာပေါ့၊ အရင်က ငါ သူ့ကို အဲဒီိလို စိတ်ဓါတ် ရှိလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝ မထင်ခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကငါ့ရဲ့Main ပြဿနာပဲ ”“ဟုတ်ပြီ အမင်းရဲ့ ပြဿနာကို သိရပြီ၊ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာကို နောက်မှအဖြေထုတ်ကြတာပေါ့၊ခု ဒုတိယ တယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်တေးသံသာကို နားဆင်ရအောင်”ဒုတိယ အလှည့်က “အသော်”…။အသော်က ဘာပြောရမလဲ စဉ်းစားနေပုံနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်လိုက်သေးတယ်၊“ငါကတော့ မိဘတွေရဲ့ ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သူ ဆိုတော့ ကိုနိုင်နဲ့ လမ်းခွဲပြီး မိဘတွေပေးစားတဲ့ကိုဘုန်းကို လက်ထပ်လိုက်ရတာ ဒီအထိ ရှင်တို့ သိပါတယ်၊ ငါဟာ ကိုနိုင့်ကို လမ်းခွဲပြီးအိမ်ထောင်တခုအပေါ်မှာ အမြဲ သစ္စာရှိခဲ့ပါတယ်၊ ကိုဘုန်းက အရင်က ရည်းစား မရှိခဲ့ဘူး၊ ကိုနိုင့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူကသ၀န်တိုတယ်၊ ကိုနိုင်နဲ့က စီးပွားရေးအရ တခါတလေ ဆက်ဆံရတာလည်း ရှိတာပေါ့..”
“သူက အမြဲတမ်း သံသယ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်တတ်တယ်၊ တကယ်တော့ မိန်းမအားလုံးဟာ မျက်နှာမများချင်ကြတဲ့ လူချည်းပဲ၊ ဒီတယောက်ထဲ ချစ်ပြီး အိမ်ထောင်ဖက် ကိုလည်း ဒီတယောက်ပဲ ဖြစ်ချင်တာပဲ၊ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ဟာ ထပ်တူကျချင်မှ ကျတတ်တာပဲ၊ သူကတော့ ငါ့တယောက်ကိုပဲ ကြိုက်ပြီးလက်ထပ်နိုင်ခဲ့တာ ဆိုတော့ ကံကောင်းတာပေါ့၊ ငါနဲ့ ကိုနိုင်ကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ သန့်ရှင်းတယ်၊ ဒါကိုသူ့မှာ သံသယ အပူတွေနဲ့ နေရတာ သူ့အတွက် မငြိမ်းချမ်းဘူး၊ သူ့ ကြည့်လိုက်ရင် မြုံစိစိနဲ့၊သေသေချာချာတော့ ငါ့ကို မပြောဘူးဟ၊ ငါတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ အဲဒီလိုချည်း မဖြစ်ချင်ဘူး၊ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့၊ ဒီလိုကိစ္စတွေက ကြာလာရင် သူ့ဘက်က ပေါက်ကွဲလာမှာ စိုးရိမ်တယ်၊ ငါ့ပြဿနာကတော့ ဒါပဲ၊ ဘာမှ မဟုတ်ပဲ..လင်မယား ခဏခဏ စကားများနေရရင် ကြာရှည်ကျ မကောင်းဘူးလေ၊ တကယ်တော့ လပ်ထပ်ခြင်း ဆိုတာသူတို့က ပိုင်ဆိုင်ပြီး ငါတို့က ပိုင်ဆိုင်ခံလိုက်ရတဲ့ သားကောင်တွေလိုပဲ၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာနားလည်မှု နဲ့အပေးအယူ တည့်မှ ဖြစ်မယ်၊ ရည်းစားတုန်းက နားလည်ခဲ့တဲ့ အချစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ တည်ရှိတဲ့အချစ်နဲ့တခြားစီပဲလို့ ထင်တာပဲ…”“ အသော်ပြောတာ ဟုတ်တယ် ”ဇင်မင်းခင်က ထောက်ခံတယ်………“ကဲ..ကဲ…ဒီတခါ ဒေါက်တာဇင်မင်းခင်ရဲ့ အလှည့်ပါ ”
“အဇင်.. ရှင်ကတော့ ကျောင်းတုန်းက ပြောဖူးတဲ့ အတိုင်း ရှင် လိုချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတခုတည်ထောင်နိုင်တယ်လို့ အမင်း ထင်တယ်..”“အမယ်လေး.. ဒေါ်ယမင်းတင်အောင်.. ကိုယ် အခုချိန်မှာ စီးပွားရေးလောကထဲကိုတောင် ပြေးဝင်လိုက်ချင်သေးတယ်၊ ရှင်တို့ကို ကြည့်ရတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ထက်တော့ လွပ်လပ်နေတယ်လို့ ထင်တာပဲ၊ကိုယ့်ဘ၀အကြောင်းကို ပြောရရင်တော့ "What is the meaning of my life" လို့ မေးရမလိုဖြစ်နေပြီ၊ အများအမြင်မှာတော့ ကိုယ့်ဘ၀ဟာ အားကျစရာကောင်းပါတယ်…၊ ယောကျာ်းက ဆရာဝန်၊ ယောက္ခမ နှစ်ယောက်လုံးကဆရာဝန်၊ ကိုယ်က ဆရာဝန်၊ ဒီကြားထဲ ကိုယ့်အဖေက ဆရာဝန်၊ တအိမ်လုံး မိသားစုဝင်တွေ ဆရာဝန်ဖြစ်နေတဲ့အခါ တခြား အကြောင်းအရာ ပြောဖို့ အခွင့်အရေး နည်းပါးလာကြတယ်..”“ကိုယ်တော့ နေ့တိုင်း liver တွေ၊ lung တွေ၊ Arteries တွေ မြင်နေရတာက တမျိုး၊ အိမ်ရောက်ရင်လည်းကြားရတဲ့ စကားက ဒီထဲက မထွက်ဘူး၊ တပတ် တခါလောက် လူစုံတဲ့ ထမင်းစားပွဲမှာလည်း ဒီအကြောင်းတွေပဲဖြစ်နေတယ်၊ တခါတလေ တူညီတာတွေ များလွန်းတော့ မတူညီတာလေးတွေကို တောင့်တမိတယ်၊တခါတလေ ထမင်းချက် အဒေါ်ကြီးပြောတဲ့ဈေးထဲက အကြောင်း၊ လမ်းမှာရန်ဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်း၊ သူတို့ရွာက အကြောင်းတွေကို ကိုယ့်မှာ မက်မောစွာ နားထောင်နေမိတယ်..”“ဒီဆရာဝန် ဘ၀ကို အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလေ၊ မိဘတွေရွေးချယ်ခဲ့တာ ဆိုတော့..၊ ကိုယ် ၀ါသနာပါရာမှာ နှစ်မြှပ်နေခွင့်ရတာဆိုရင်တော့ ငါဒီလောက်တော့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး၊ တခါတလေ Uterus ရောဂါတွေ ကြည့်ပြီး ကိုယ်က Maiden ဘ၀ကို နှမြောနေမိတယ်၊ ကိုယ်ပြောတာတွေဟာ ခုချိန်မှာ ရယ်စရာကောင်းနေလိမ့်မယ်၊ ကိုယ့်မှာ body တွေကို မြင်တွေ့နေရတော့တကယ်တော့ လူဟာ ဘာမှ မဟုတ်ပါလား ဆိုတဲ့ အသိတရားရနေပြီ၊ အလုပ်ပြန်ချိန်တွေကလည်း သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ ဘယ်တော့မှ မတူဘူး၊ သူက မနက်ဆေးခန်းဝင်ရတော့ ကိုယ် မနိုးခင်သွားနှင့်ပြီ၊ ညကလည်းသူက စောရင်စောတယ်၊ ကိုယ်ကလည်း နောက်ကျတတ်တယ်၊ လင်မယားနှစ်ယောက် အတူတူ ထမင်းမစားဖြစ်တာ ကြာပြီ ၊ အေးအေးဆေးဆေးလည်း စကားမပြောဖြစ်ဘူး၊ အဓိက ကတော့ ကိုယ်တို့ဟာLife တခုထဲမှာ နစ်မြုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်၊ အဲဒီအတွက် ငြီးငွေ့မှု တအားဖြစ်တယ်၊ သူလည်းအရမ်းပင်ပန်းတယ်၊ `ကိုနေပိုင်`ကို မိဘသဘောတူတယ် ဆိုပေမဲ့ ငါတို့လည်း မေတ္တာရှိတော့ တခြားပြဿနာတော့ မရှိပါဘူး ”
“အဇင်.. ရှင်ကတော့ ကျောင်းတုန်းက ပြောဖူးတဲ့ အတိုင်း ရှင် လိုချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတခုတည်ထောင်နိုင်တယ်လို့ အမင်း ထင်တယ်..”“အမယ်လေး.. ဒေါ်ယမင်းတင်အောင်.. ကိုယ် အခုချိန်မှာ စီးပွားရေးလောကထဲကိုတောင် ပြေးဝင်လိုက်ချင်သေးတယ်၊ ရှင်တို့ကို ကြည့်ရတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ထက်တော့ လွပ်လပ်နေတယ်လို့ ထင်တာပဲ၊ကိုယ့်ဘ၀အကြောင်းကို ပြောရရင်တော့ "What is the meaning of my life" လို့ မေးရမလိုဖြစ်နေပြီ၊ အများအမြင်မှာတော့ ကိုယ့်ဘ၀ဟာ အားကျစရာကောင်းပါတယ်…၊ ယောကျာ်းက ဆရာဝန်၊ ယောက္ခမ နှစ်ယောက်လုံးကဆရာဝန်၊ ကိုယ်က ဆရာဝန်၊ ဒီကြားထဲ ကိုယ့်အဖေက ဆရာဝန်၊ တအိမ်လုံး မိသားစုဝင်တွေ ဆရာဝန်ဖြစ်နေတဲ့အခါ တခြား အကြောင်းအရာ ပြောဖို့ အခွင့်အရေး နည်းပါးလာကြတယ်..”“ကိုယ်တော့ နေ့တိုင်း liver တွေ၊ lung တွေ၊ Arteries တွေ မြင်နေရတာက တမျိုး၊ အိမ်ရောက်ရင်လည်းကြားရတဲ့ စကားက ဒီထဲက မထွက်ဘူး၊ တပတ် တခါလောက် လူစုံတဲ့ ထမင်းစားပွဲမှာလည်း ဒီအကြောင်းတွေပဲဖြစ်နေတယ်၊ တခါတလေ တူညီတာတွေ များလွန်းတော့ မတူညီတာလေးတွေကို တောင့်တမိတယ်၊တခါတလေ ထမင်းချက် အဒေါ်ကြီးပြောတဲ့ဈေးထဲက အကြောင်း၊ လမ်းမှာရန်ဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်း၊ သူတို့ရွာက အကြောင်းတွေကို ကိုယ့်မှာ မက်မောစွာ နားထောင်နေမိတယ်..”
“ဒီဆရာဝန် ဘ၀ကို အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလေ၊ မိဘတွေရွေးချယ်ခဲ့တာ ဆိုတော့..၊ ကိုယ် ၀ါသနာပါရာမှာ နှစ်မြှပ်နေခွင့်ရတာဆိုရင်တော့ ငါဒီလောက်တော့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး၊ တခါတလေ Uterus ရောဂါတွေ ကြည့်ပြီး ကိုယ်က Maiden ဘ၀ကို နှမြောနေမိတယ်၊ ကိုယ်ပြောတာတွေဟာ ခုချိန်မှာ ရယ်စရာကောင်းနေလိမ့်မယ်၊ ကိုယ့်မှာ body တွေကို မြင်တွေ့နေရတော့တကယ်တော့ လူဟာ ဘာမှ မဟုတ်ပါလား ဆိုတဲ့ အသိတရားရနေပြီ၊ အလုပ်ပြန်ချိန်တွေကလည်း သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ ဘယ်တော့မှ မတူဘူး၊ သူက မနက်ဆေးခန်းဝင်ရတော့ ကိုယ် မနိုးခင်သွားနှင့်ပြီ၊ ညကလည်းသူက စောရင်စောတယ်၊ ကိုယ်ကလည်း နောက်ကျတတ်တယ်၊ လင်မယားနှစ်ယောက် အတူတူ ထမင်းမစားဖြစ်တာ ကြာပြီ ၊ အေးအေးဆေးဆေးလည်း စကားမပြောဖြစ်ဘူး၊ အဓိက ကတော့ ကိုယ်တို့ဟာLife တခုထဲမှာ နစ်မြုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်၊ အဲဒီအတွက် ငြီးငွေ့မှု တအားဖြစ်တယ်၊ သူလည်းအရမ်းပင်ပန်းတယ်၊ `ကိုနေပိုင်`ကို မိဘသဘောတူတယ် ဆိုပေမဲ့ ငါတို့လည်း မေတ္တာရှိတော့ တခြားပြဿနာတော့ မရှိပါဘူး ”
အချိန်ပေးနှိုင်မှုနဲ့လည်း ဆိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်၊ မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်တို့ သွေးတွေက ကြာလေ အေးလေ၊စိမ်းလေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်… ဟား ဟား…”အဇင်က စကားပြောရင်း သဘောကျစွာ ရယ်ပါသည်။“အဇင် လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်တွေကို အတိုးနဲ့ ချေးမယ်”အသော်က ပြောသည်။“အဇင် life ကလည်း တမျိုးတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်၊ ခရီးတခုခုကို ရက်ရှည် ထွက်ရင်လည်းတနည်းအားဖြင့် လန်းဆန်းမှုတော့ ဖြစ်သွားမယ် ထင်တယ်”“အမယ် ပြောတာကို ကိုယ် စဉ်းစားဖူးတယ်၊ ကလေး မရခင် အပန်းဖြေတော့ ထွက်ဦးမယ်လို့၊ ကဲ…အမယ့်အလှည့်၊ ပြော… စာရေးဆရာမ ဆိုတော့ ဇတ်လမ်းအတုတွေတော့ မပြောနဲ့နော်..”
“စိတ်ချ၊ ကျွန်မကလည်း ရှင်တို့ကို ပြောချင်နေတာ ကြာလှပြီ၊ ကိုနေနဲ့ ကျွန်မက အနုပညာသမားချင်းအိမ်ထောင်ကျကြတာပါပဲ၊ သူက ကွန်ပျူတာ ဒီဇိုင်နာ ဆိုတော့ အမြဲတမ်း ကွန်ပြူတာနဲ့ နပန်းလုံးနေတာပဲ၊ခုဆိုရင် ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ ပုဂံနက်နဲ့ စုံနေတာပဲ၊ တခါတလေ သူ့ကိုကြည့်ရတာ Robot(ရိုဘော့)စက်ရုပ်တရုပ်လိုပဲ၊ လူကနေ စက်ရုပ်ဖြစ်နေတဲ့ လူသားပဲ၊ ခုခေတ်ကြီးက အရမ်းတိုးတက်တော့ သူ့ဦးနှောက်တွေက အရမ်းအလုပ်လုပ်နေတယ်၊ တခါတလေ သူ ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်မ၀င်စားသလို၊ကျွန်မပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကိုလည်း သူက စိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘူး…”“တခါတလေ ကျွန်မ ရင်ဖွင့်လိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ရှည်စွာ နားထောင်ပေးမယ့် သူ လိုသလို၊အပြုံးနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးမယ့် သူလည်း လိုအပ်တယ်၊ လိုအပ်ချက်တွေကို အလိုက်တသိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့်သူလည်း လိုတာပေါ့၊ အဲဒီလို အရာတွေကို အဆင်သင့်ရှိတတ်တဲ့ မိခင်က မရှိတော့ သူ့ကိုမိခင်နေရာမှာအစားထိုးကြည့်ပေမယ့် မရခဲ့ဘူး၊ ပုံသဏ္ဍာန် တူညီပြီး အထဲက အရသာ မတူညီတဲ့ ဘီစကစ်တခုကိုစားရသလိုပဲ”“ကျွန်မ စာတွေကိုပဲ ဖိရေးနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ သူ့ကို မေ့သွားတတ်တယ်၊ သူ့မှ မဟုတ်ပါဘူး၊အရာရာကိုမေ့သွားတယ်၊ သူကလည်း ကွန်ပျူတာခုံပေါ် ရောက်ရင် အရာအားလုံး မေ့သွားတယ်၊ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးက ကြာလေ အေးစက်လေပဲ၊ သူ ကိုယ့်အပေါ် အစာမကျေတာ တခုရှိတယ်၊ ယောကျာ်းက ဒီဇိုင်နာဖြစ်လျက်နဲ့ ကျွန်မ ၀တ္တု မျက်နှာဖုံး(cover)တွေကိုသူ့ကို ဘယ်တော့မှ ဆွဲမခိုင်းဘူး၊ ကျွန်မ သဘောကကျွန်မ လုပ်တဲ့ အလုပ်တခုကို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး လုပ်တယ်လို့ မမြင်စေချင်လို့ပဲ၊ အဲဒါကိုသူက တမျိုး မြင်တယ်၊ကျွန်မ ကိစ္စတွေကို သူ ၀င်မပါသလို သူ့ ကိစ္စတွေထဲလည်း ကျွန်မ ၀င်မပါဘူး..”
“ နောက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ ရိုဘော့ စက်ရုပ်က စကားအရမ်းနည်းပြီး အေးတော့ သူ့ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေမှန်းတော်ရုံနဲ့ မသိရဘူး၊ တနေ့တုန်းကတော့ ကွန်ပျူတာကို အမှတ်တမဲ့ ဖွင့်ကြည့်ရင်း သူ့ခံစားချက်တွေရေးထားတာ တွေ့ရတယ်၊ ကျွန်မလည်း တော်တော် အံ့သြသွားတယ်၊ အဲဒီနေ့က စကားများထားတဲ့ နေ့ပေါ့..”“ကျွန်တော့် မိန်းမ စာရေးဆရာမ `မယ်ဘုန်းခင်` ဟာ ကျွန်တော့်ကို အရမ်းအထင်သေးပါတယ်၊ကျွန်တော့်ကိုဥပက္ခောပြုထားပါတယ်၊ ကျွန်တော့် ခံစားချက်တွေ ပြည့်နှက်လာတိုင်း ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲ အဖော်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်..၊သူ ကျွန်တော့် အပေါ် ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မေ့ထားတဲ့ အချိန်တွေ များတယ်၊ ကျွန်တော်မပြောရက်ပါ၊သူ စာရေးပျက်မှာ စိုးရိမ်ပါတယ်တဲ့..”“ အလို… ရှင့်ရဲ့ စက်ရုပ်ကြီးက အလာကြီးပါလား၊ ရယ်ရတယ်”“ အမယ်..အမှန်တော့ ရှင့်လစ်ဟင်းမှုတွေ များပြီလို့ ထင်တယ်..”“အမင်းရယ်.. စာရေးတယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်က ဈဉ်ဝင်တဲ့ အချိန်မှ ရတာဆိုတော့..”“ဒါတော့ ဒါပေါ့ဟာ၊ သူ့ ခံစားချက်လေးက ငါတောင် သနားလာပြီ..”အသော်က အဇင့်ကို ထုရင်းပြောတယ်။“ ငါတို့ အားလုံးရဲ့ တယောက်ချင်း ပြဿနာက ဘာမှ သိပ်မကြီးကျယ်ဘူးလို့ ထင်တယ်၊ဘယ်လိုဆိုရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်မလဲ၊ စာရေးဆရာမ အမယ့်ကိုပဲ အကြံတောင်းရမှာပဲ ..”အသော်က ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ ပြောတယ်။“ ရှင်တို့ကို တခုပြောမယ်၊ ရိုးတံနဲ့ ပန်းပွင့်ကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ၊ အဲဒီ ရိုးတံနဲ့ပန်းပွင့်ရဲ့ ကြားထဲကဆက်သွယ်မှုကို ဘယ်သူမှ မမြင်နိုင်ကြဘူး၊ ပန်းပွင့်ဟာ ခိုင်မာတဲ့ ရိုးတံ မရှိရင် မဖြစ်သလို၊ပန်းပွင့် မရှိရင်လည်းရိုးတံဘ၀ဟာ အဓိပ္ပာယ် ရှိလာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ မမြင်နိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ရိုးတံနဲ့ပန်းပွင့်ကို ချည်နှောင်ထားတယ်၊ တခုနဲ့ တခု ဒွန်တွဲနေတယ်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀ကလည်း အဲဒီသဘောတရားနဲ့ တူတယ်၊ရိုးတံကို ပစ်ပယ်လို့လည်း မရဘူး”
“ပန်းပွင့်တွေမှာတောင် သူတို့နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ရိုးတံတွေ ဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်၊ ကျွန်မတို့လည်း ဘ၀မှာလိုချင်တဲ့ အရာကို ရွေးချယ်ပြီး ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ခဲ့ကြတယ်၊ ဘယ်သူကမှအဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို မမှားချင်ကြဘူး၊ အိမ်ထောင်ကွဲ ဘ၀ ကို ဘယ်သူမှ မရောက်ချင်ကြဘူး၊ ဘာကိုမှလည်းအဆုံးရှုံးမခံချင်ကြဘူး၊ အဲဒီ မဆုံးရှုံးချင်တဲ့ အရာကို ကာကွယ်ဖို့ နည်းတနည်းတော့ လိုအပ်တယ်၊ အဲဒါကတော့ကိုယ်စီရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ အရာတွေကို ပွင့်လင်းစွာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ပဲ..”“အမယ်.. ပြောတာ လက်ခံတယ်၊ အသော်ကတော့ သူ့ကို အိမ်ထောင်ရေးမှာ သစ္စာမြဲမယ့်၊ လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့ သူ ဖြစ်စေချင်တယ်..”“အဇင်ကတော့ တခါတလေ တရေးနိုးရင် အားလုံးကို စွန့်ပြီး တရားအားထုတ်ချင်မိတယ်၊ တကယ်တမ်းကျတော့ ပါရမီဆိုတာ မပါသေးတော့ လူ့လောက စစ်ပွဲထဲမှာ နေနေရဦးမှာပဲ”“ဒီလူ့လောက စစ်ပွဲထဲမှာ နေသရွေ့ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ ဘ၀မှာ နေပျော်စရာ ဘ၀တခု ဖြစ်အောင်၊ ကျေနပ်နိုင်အောင် နေရမှာပဲ၊ သိပ်မကြီးထွားသေးတဲ့ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းရမှာပဲ၊ ကျွန်မတို့ပန်းပွင့်တွေ လှပဖို့ ရိုးတံဟာ ခိုင်ခံ့ဖို့ လိုအပ်တယ် ..”“ အမင်းကတော့ သူ မလုပ်ချင်တာ ဇွတ်မလုပ်ခိုင်းပါဘူး၊ ပြေလည်အောင် ညှိယူဖို့စဉ်းစားထားတယ်..”“ကျွန်မတော့ ၀တ္တုအတွက် plot တခုရပြီ ”ထိုနေ့က ကျွန်မတို့ အားလုံး စကားဝိုင်းလေး ရုပ်သိမ်းပြီး ချိန်မှာ ထူးခြားစွား ပို၍လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေပါသည်။ညရောက်တော့ စာရေးစားပွဲမှာ မထိုင်ဖြစ်တော့ဘဲ ကွန်ပျူတာ အခန်းထဲက ရိုဘော့စက်ရုပ်နား သွားရင်းကော်ဖီတခွက် ချပေးတော့ သူ အံ့သြသွားတယ်။ သူ့ ဘေးနား ထိုင်ရင်း သူ့ရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ကျွန်မဝေဖန်ပေးတယ်။ သူက ကျွန်မကို အခြားလုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေထုတ်ပြတယ်၊ သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ စကားသံတွေကပိုသွက်လက်လာတယ်။“ကျွန်မ နောက်ထွက်မယ့် ၀တ္တု မျက်နှာဖုံးပုံကို ဆွဲပေးရမယ်နော် ” လို့ ပြောတော့ သူကအံ့သြစွာ ခေါင်းစောင်းကြည့်ပြီး ရယ်မောရင်း….“ခုတော့.. ကိုယ့်မိန်းမ.. ကိုယ့်ကို အသုံးလိုအပ်လာပြီပေါ့…၊ အလှဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့၊ ခေါင်းစဉ်ကဘာတဲ့လဲ..”“ ရိုးတံနဲ့ ပန်းပွင့် ”သူ့နှုတ်ခမ်းက “ ရိုးတံနဲ့ ပန်းပွင့် ” လို့ လိုက်ရေရွတ်လိုက်တယ်။ကျွန်မကလည်း “ ရိုးတံနဲ့ ပန်းပွင့် ” လို့ ပြောရင်း ခပ်နွေးနွေး ရယ်မောလိုက်ပါတော့တယ်… ။ချောအိမာန်(မန္တလေး)ကလျာမဂ္ဂဇင်း၂၀၀၄၊ စက်တင်ဘာလ၊
“ပန်းပွင့်တွေမှာတောင် သူတို့နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ရိုးတံတွေ ဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်၊ ကျွန်မတို့လည်း ဘ၀မှာလိုချင်တဲ့ အရာကို ရွေးချယ်ပြီး ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ခဲ့ကြတယ်၊ ဘယ်သူကမှအဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို မမှားချင်ကြဘူး၊ အိမ်ထောင်ကွဲ ဘ၀ ကို ဘယ်သူမှ မရောက်ချင်ကြဘူး၊ ဘာကိုမှလည်းအဆုံးရှုံးမခံချင်ကြဘူး၊ အဲဒီ မဆုံးရှုံးချင်တဲ့ အရာကို ကာကွယ်ဖို့ နည်းတနည်းတော့ လိုအပ်တယ်၊ အဲဒါကတော့ကိုယ်စီရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ အရာတွေကို ပွင့်လင်းစွာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ပဲ..”“အမယ်.. ပြောတာ လက်ခံတယ်၊ အသော်ကတော့ သူ့ကို အိမ်ထောင်ရေးမှာ သစ္စာမြဲမယ့်၊ လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့ သူ ဖြစ်စေချင်တယ်..”“အဇင်ကတော့ တခါတလေ တရေးနိုးရင် အားလုံးကို စွန့်ပြီး တရားအားထုတ်ချင်မိတယ်၊ တကယ်တမ်းကျတော့ ပါရမီဆိုတာ မပါသေးတော့ လူ့လောက စစ်ပွဲထဲမှာ နေနေရဦးမှာပဲ”“ဒီလူ့လောက စစ်ပွဲထဲမှာ နေသရွေ့ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ ဘ၀မှာ နေပျော်စရာ ဘ၀တခု ဖြစ်အောင်၊ ကျေနပ်နိုင်အောင် နေရမှာပဲ၊ သိပ်မကြီးထွားသေးတဲ့ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းရမှာပဲ၊ ကျွန်မတို့ပန်းပွင့်တွေ လှပဖို့ ရိုးတံဟာ ခိုင်ခံ့ဖို့ လိုအပ်တယ် ..”
“ အမင်းကတော့ သူ မလုပ်ချင်တာ ဇွတ်မလုပ်ခိုင်းပါဘူး၊ ပြေလည်အောင် ညှိယူဖို့စဉ်းစားထားတယ်..”“ကျွန်မတော့ ၀တ္တုအတွက် plot တခုရပြီ ”ထိုနေ့က ကျွန်မတို့ အားလုံး စကားဝိုင်းလေး ရုပ်သိမ်းပြီး ချိန်မှာ ထူးခြားစွား ပို၍လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေပါသည်။ညရောက်တော့ စာရေးစားပွဲမှာ မထိုင်ဖြစ်တော့ဘဲ ကွန်ပျူတာ အခန်းထဲက ရိုဘော့စက်ရုပ်နား သွားရင်းကော်ဖီတခွက် ချပေးတော့ သူ အံ့သြသွားတယ်။ သူ့ ဘေးနား ထိုင်ရင်း သူ့ရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ကျွန်မဝေဖန်ပေးတယ်။ သူက ကျွန်မကို အခြားလုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေထုတ်ပြတယ်၊ သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ စကားသံတွေကပိုသွက်လက်လာတယ်။“ကျွန်မ နောက်ထွက်မယ့် ၀တ္တု မျက်နှာဖုံးပုံကို ဆွဲပေးရမယ်နော် ” လို့ ပြောတော့ သူကအံ့သြစွာ ခေါင်းစောင်းကြည့်ပြီး ရယ်မောရင်း….“ခုတော့.. ကိုယ့်မိန်းမ.. ကိုယ့်ကို အသုံးလိုအပ်လာပြီပေါ့…၊ အလှဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့၊ ခေါင်းစဉ်ကဘာတဲ့လဲ..”“ ရိုးတံနဲ့ ပန်းပွင့် ”သူ့နှုတ်ခမ်းက “ ရိုးတံနဲ့ ပန်းပွင့် ” လို့ လိုက်ရေရွတ်လိုက်တယ်။ကျွန်မကလည်း “ ရိုးတံနဲ့ ပန်းပွင့် ” လို့ ပြောရင်း ခပ်နွေးနွေး ရယ်မောလိုက်ပါတော့တယ်… ။ချောအိမာန်(မန္တလေး)ကလျာမဂ္ဂဇင်း၂၀၀၄၊ စက်တင်ဘာလ၊
“ကိုယ်စဉ်းစားတာ တခုတော့ ရှိတယ်၊ ကိုယ်တို့ Relax ဖြစ်အောင်နေပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် အချိန်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်၊ အဲဒီလိုမှ မလုပ်ရင် ကိုယ်တို့ရဲ့ Body တွေဟာ စက်ရုပ်တွေ မဟုတ်ဘူးလေ၊သေဆုံးကုန်လိမ့်မယ်၊ ရှင်တို့နဲ့ ခုလို စကားပြောလိုက်ရလို့ ခံသာသေးတယ်၊ ကိုယ်တို့မှာ အဓိက ပြဿနာက အချိန်ရှားပါးလွန်းတယ်၊ အိမ်ထောင်တခုကို ကြာရှည်ခိုင်မြဲဖို့ဆိုရင် တယောက်အပေါ် တယောက်အချိန်ပေးနှိုင်မှုနဲ့လည်း ဆိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်၊ မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်တို့ သွေးတွေက ကြာလေ အေးလေ၊စိမ်းလေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်… ဟား ဟား…”